I-Cast ye-HGTV 'yokuHlaziywa kweBrady kakhulu' -Uluhlu olupheleleyo - Indlela Yokuphila
I-Cast ye-HGTV 'yokuHlaziywa kweBrady kakhulu' -Uluhlu olupheleleyo
URachel LunaImifanekiso kaGetty
NgoJulayi 2018, Iqela leBrady indlu wanyuka waya kwimarike yokuthengisa izindlu nomhlaba okokuqala kwiminyaka engama-50, kwaye i-HGTV yayisazi ukuba ibifanele ukuba njalo. Ngombono wenethiwekhi, abantwana bakaBrady Sihlangene emva kweminyaka eli-15 saphinda saphinda sazi iParamount Studios Stage 5 — apho bonke bakhule befota indawo ephambili yama-70s kusapho-ngaphakathi kwendlu eyaziwayo yeStudio City, eCalifornia.
Kodwa Iqela leBrady abantwana -Maureen McCormick (Marcia), Eve Plumb (Jan), Susan Olsen (Cindy), Barry Williams (Greg), Mike Lookinland (Bobby), Christopher Knight (Peter) —asiyedwa kulungiselelwa ukulungiswa kwekhaya kwaye sisebenze kunye nabantu abasibhozo Yeyona mikhosi mhle yeHGTV. Ngaphambi kokuntywila Ukulungiswa ngokutsha kweBrady , jonga uluhlu olupheleleyo lwale projekthi kube kanye ebomini.
ukhathalelo lomgangatho okhuni
Jonga igalari Shumi elinanyeIifoto URachel LunaImifanekiso kaGetty 1Kaninzi '11UMaureen McCormick (uMarcia Brady)
Yaziwa njenge UMarcia Brady , UMaureen McCormick ubuyele ezingcanjini zakhe kwakhona ukunceda ukuphinda enze iseti ye studio akhulele kuyo kanye UBrady Bunch indlu . Umbhali othengisa kakhulu udibene Abazalwana bePropati ’UDrew noJonathan Scott, uChristopher Knight (Peter), noSusan Olsen (Cindy) yenye yezona projekthi zinkulu zokulungisa amakhaya kumabonakude.
Ezinxulumene: Ukulungiswa ngokutsha kweBrady Ekhohlo uMaureen McCormick kunye neFords Starstruck omnye komnye
URachel LunaImifanekiso kaGetty MbiniKaninzi '11UEve Plumb (uJan Brady)
Umntwana ophakathi ophakathi eMelika, uJan Brady (aka Eve Plumb) wajoyina iHGTV Ukulungiswa ngokutsha kweBrady, ukusebenza ngokusondeleyo kunye Ukubuyiselwa kweMikhosi 'ULeanne noSteve Ford . Inkqubo ye- umzobi wexesha elide Ukwaboleke izakhono zakhe zobugcisa zokubandakanya umsebenzi wobugcisa kuwo wonke Iqela leBrady indlu.
Ezinxulumene: Iyacima UBrady Bunch I-Star Eve Plumb yiPeyinti enetalente enkulu
UJerod HarrisImifanekiso kaGetty 3Kaninzi '11USusan Olsen (uCindy Brady)
Ukusukela ukuqala kweenkwenkwezi njengoBrady omncinci, uSusan Olsen uye waba ngumbhali, ubuntu bukanomathotholo kunye nommeli wentlalontle wezilwanyana osebenzayo. Ukuwonga iminyaka engama-50 yobuhlobo nabanye abantwana bakaBrady, wafumana ithuba lokusebenza neenkwenkwezi zeHGTV Abazalwana bePropati kwaye Amathambo alungileyo iinkwenkwezi Mina Starsiak Hawk noKaren Laine⁠ —ngasathethi ke, ukuchitha ixesha kunye nomntakwabo kwiscreen, UMike Lookinland (UBobby Brady).
iingoma zelizwe malunga nekhaya
Ezinxulumene: Kunjalo, Ukulungiswa ngokutsha kweBrady Isiqendu sesi-2 Kuboniswe i-Original Kitty Karry-All Doll
URachel LunaImifanekiso kaGetty 4Kaninzi '11UBarry Williams (uGreg Brady)
Iqela leBrady Indlu ayinakugqitywa ngaphandle UGreg's Groovy Attic Kwaye u-Barry Williams usebenze yedwa no-LG Spencer we-HGTV ukuyenza yenzeke.
'Sigcinile ubuhlobo kuyo yonke le minyaka,' uxelele Indlu entle malunga nosapho lukaBrady. 'Into eyahlukileyo ngala mava kulo nyaka uphelileyo kukuba sihlangana ngaxeshanye, ngokudibeneyo njengeqela, ke ngoko kukho enye ikhemistri ebambekayo kwaye iqhelekile.'
Ezinxulumene: Ukulungiswa ngokutsha kweBrady Wenze utshintsho olukhulu kwi Iqela leBrady Indlu
UJerod HarrisImifanekiso kaGetty 5Kaninzi '11UChristopher Knight (Peter Brady)
Inkulumbuso ye Ukulungiswa ngokutsha kweBrady ibonisa uChristopher Knight esenza iiprojekthi ezahlukeneyo ngaphakathi Iqela leBrady Indlu ecaleni kwePropati yabazalwana kunye noJasmine Roth. Kwaye ngaphandle kokuthetha ukuba ugcine lo mhla ngaphezu kwesihlandlo esinye-ukusuka ekupeyinteni ukubuyisela usapho umfanekiso wehashe . Ewe kunjalo, waqinisekisa ukuba wonwabile ngalo lonke ixesha elandela imigaqo kamama wakhe weTV.
UJerod HarrisImifanekiso kaGetty 6Kaninzi '11UMike Lookinland (uBobby Brady)
Omncinci kubafana bakaBrady, uMike Lookinland-omazi njengoBobby Brady-uhlala kufutshane nodadewabo omncinci kumabonakude, uSusan Olsen (Cindy). Ngokudibeneyo, bathatha uhlaziyo lobomi bonke. 'Ukuqwalaselwa kweenkcukacha akunamda kule ndawo,' utshilo kwisiqendu sokuqala malunga nomboniso wokuqala.
Ezinxulumene: Amaxesha ama-6 amangalisayo avela kwi-HGTV's Ukulungiswa ngokutsha kweBrady Inkulumbuso
ubunjobrenovI-Instagram 7Kaninzi '11UDrew noJonathan Scott abavela 'kubazalwana bePropati'
Abazalwana bePropathi banokuba nayo yonke i-HGTV franchise, ngenxa yezakhono zabo ezintle kunye nobudlelwane obusondeleyo bomntakwabo, kodwa i-duo yayingoyiki ukuyamkela loo nto Iqela leBrady Indlu ibiyi ukulungiswa kwezona ndawo zinkulu zokuhlala kumakhondo omsebenzi wabo kwaye bawuthanda umzuzwana ngamnye womceli mngeni.
Ezinxulumene: Ukulungiswa ngokutsha kweBrady Ucelomngeni kubazalwana bePropathi ngeyona ndlela ingalindelekanga
URachel LunaImifanekiso kaGetty 8Kaninzi '11UJasmine Roth ovela 'kubuchule obufihliweyo'
Ubukho obufihliweyo inkwenkwezi UJasmine Roth ithe ibiyi akukho-brainer ukuba yinxalenye yeprojekthi ye-HGTV yamva nje, ngokukhawuleza akhwele xa efowunelwa. Kuyo yonke inkqubo ye-reno yasekhaya, inzalelwane yaseCalifornia yathathelwa ingqalelo njengomphathi weprojekthi, ukunceda nabani na naphina apho anakho.
indlu ka-bella no-edward
Ezinxulumene: Umfazi onguvulindlela upheke kwi-Avocado ye-Avocado-kunye ne-Orenji yeKhitshi yesiQendu esiKhethekileyo
UJerod HarrisImifanekiso kaGetty 9Kaninzi '11ULeanne noSteve Ford 'babuyiselwe ziiFords'
Ukubuyiselwa kweMikhosi Iinkwenkwezi uLeanne noSteve Ford bakuxabisile ukuba yinxalenye yeqela elihloniphayo ukubaluleka kwazo zonke iinkcukacha zikaBrady. I-duo yomntakwabo-dade yayi uyolo lokusebenza UMaureen McCormick kunye noEva Plumb.
Sikhule sibukele Iqela leBrady kwiNickelodeon, USteve Ford uxelele Indlu entle . Kwakungathi akukho mntu simaziyo owayengayibukeli ngelo xesha. '
Ezinxulumene: Wenza ntoni uHGTV nge Iqela leBrady Indlu?
idesika e-oval office
UMichael KovacImifanekiso kaGetty 10Kaninzi '11Mina Starsiak kunye noKaren Laine abavela 'kwiiBones ezilungileyo'
Waziwa kakhulu njengeqela eliyintandokazi likamama-intombi, Mina Starsiak Hawk kwaye UKaren Laine zilungele nawuphi na umceli mngeni, kubandakanya ukuba ngowokuqala ukukhulula Iqela leBrady Indlu kwizikhonkwane zayo kunye nokwenza iinyawo zayo ezingama-2 000 ezongezelelweyo. Aba babini bafumene uncedo oluvela kuSusan Olsen nakwimemori yakhe yokubanceda babethelela zonke iinkcukacha zokugqibela.
lara.spencerI-Instagram Shumi elinanyeKaninzi '11ULara Spencer ovela 'kwiFlip Market Flip'
U-Lara Spencer we-HGTV ukhulele kwi UBrady Bunch Ibaleka kwakhona, ke kwavakala ngathi kufanelekile xa wayecelwa ukuba afikelele kwikhaya elinokuthinta iconic, njengezikhanyisi, isitya seelekese, kunye nendlulamthi egxunyekwe ngamantombazana. Umbuki zindwendwe unethuba lokusebenza ngokusondeleyo noBarry Williams kwiGroovy Attic kaGreg kwaye baya konwaba noMarcia, uMarcia, uMarcia!
Ukhumbule uninzi lweenkcukacha kwaye wayenjalo, utshilo uLara Indlu entle malunga nokusebenza noBarry. 'Ngokwenene yayiliphupha elizalisekayo, hayi nje ngomntu osebenza kuyilo kunye nobuntu be-HGTV, kodwa nanjengomntu othanda lo mboniso.'
Ezinxulumene: Iqela leBrady Indlu ngokusemthethweni yiCapsule yeXesha lama-70
OkulandelayoJonga Zonke iikhaphethi eziBomvu ziJongeka kwi-2019 MTV VMA Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiU-Selena barrientos Nxibelelana noLonwabo kunye noMhleli weendaba U-Selena Barrientos ngumnxibelelanisi wokuzonwabisa kunye nomhleli weendaba woGcino-Ndlu oluLungileyo- ubhala kwaye anike ingxelo ngemiboniso bhanyabhanya kunye neemovie zamva nje, ukongeza ekuboniseni abantu abadumileyo baseLatinx.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Idesika yeofisi yasekhaya
izityalo ezifana nelanga
inyaniso malunga fixer eliphezulu
Itafile yokutyela yomntu o-2